Nọmba French sitere na 1 ruo 1000 - UniProyecta
Nọmba French sitere na 1 ruo 1000
Mgbe anyị malitere mụta asụsụ ọhụrụ, dịka ọ nwere ike ịbụ asụsụ French ma ọ bụ Bekee, otu n'ime ihe mbụ doro anya nke ọma bụ nọmba. Yabụ, taa, anyị ga -ahụ ka esi ede ha, ka esi akpọpụta ya na ụfọdụ mmega ahụ ka ị wee nwee ike ime ya. Ke adianade do, anyị kwadebere a egwu na -adọrọ adọrọ nke onye France na -agụpụta nọmba site na 1 ruo 20. Ị dịla njikere? Nwee ezigbo kọfị na… ka anyị bido!
1 Otu esi ede nọmba na French
1.1 Site na 1 ruo 20
1.2 Site na 1 ruo 100
1.3 Site na 1 ruo 1000
1.4 Ndị nkịtị
1.5 Ndị Kadịnal
2 Si akpọ nọmba na French
3 Ihe omume
Otu esi ede nọmba na French
Na ngalaba nke mbụ anyị depụtara ụfọdụ tebụl bara ezigbo uru nke ị ga -enwe ike ịhụ nọmba n'onwe ya n'aka ekpe, ka esi ede ya n'asụsụ French na kọlụm etiti na, n'ikpeazụ, ka esi ede ya n'asụsụ Spanish na ikpeazụ ogidi.
Site na 1 ruo 20
1 un Uno
2 deux dos
3 trois atọ
4 quatre anọ
5 cinq cinco
6 six isii
7 sept asa
8 huit asatọ
9 neuf iteghete
10 dix iri
11 onze ozugbo
12 douze doce
13 treize iri na atọ
14 quatorze iri na anọ
15 quinze iri na ise
16 seize iri na isii
17 dix-sept iri na asaa
18 dix-huit iri na asatọ
19 dix-neuf iri na itoolu
20 vingt iri abụọ
Dị ka anyị nwere ike ịhụ, ọnụọgụ iri abụọ nke mbụ yitụrụ nke Spanish. Isi ihe ị ga -echeta site na ngalaba a bụ na rue ụbọchị iri na isii, a na -echekwa nha anya. Mgbe e mesịrị, ọ dị mfe, ebe 17, 18 na 19 guzobere site na isonye na iri (Dix) na nọmba kwekọrọ. N'ụzọ dị otu a: dix-sept, dix-huit na dix-neuf.
Site na 1 ruo 100
6 isii isii
8 asatọ asatọ
9 ọhụrụ iteghete
11 iri na otu ozugbo
12 iri na abụọ doce
13 iri na atọ iri na atọ
14 iri na anọ iri na anọ
15 iri na ise iri na ise
16 iri na isi iri na isii
18 iri na asatọ iri na asatọ
19 dik neuf iri na itoolu
20 iri abụọ iri abụọ
21 oge et a iri abụọ
22 vingt-deux iri abụọ na abụọ
23 vingt-trois iri abụọ na atọ
24 vingt-quatre iri abụọ na anọ
25 iri abụọ na ise iri abụọ na ise
26 vingt-isi iri abụọ na isii
27 vingt-Sept iri abụọ na asaa
28 vingt-huit iri abụọ na asatọ
29 vingt-neuf iri abụọ na itoolu
30 iri ato iri ato
31 trente et un iri atọ na otu
32 trente-deux iri atọ na abụọ
33 iri atọ na atọ Iri atọ na atọ
34 iri atọ na anọ iri atọ na anọ
35 iri atọ na ise iri atọ na ise
36 iri atọ na isii iri atọ na isii
37 trente-Sept iri atọ na asaa
38 trente-huit iri atọ na asatọ
39 trente neuf iri atọ na itoolu
40 kwarantaini Nke iri anọ
41 kwarantaini na un Iri anọ na otu
42 kwarantaini-deux iri anọ na abụọ
43 kwarantaini-trois iri anọ na atọ
44 kwarantaini Iri anọ na anọ
45 kwaranta-cinq iri anọ na ise
46 kwarantaini-isii Iri anọ na isii
47 kwarantaini iri anọ na asaa
48 kwarantaini-huit iri anọ na asatọ
49 kwarantaini-neuf iri anọ na itoolu
50 iri ise iri ise
51 iri ise et un Iri ise na otu
52 iri ise-deux iri ise na abụọ
53 iri ise trois Iri ato na atọ
54 iri ise na anọ Iri ise na anọ
55 iri ise na ise iri ise na ise
56 iri ise na isii Iri na ise na isii
57 cinquante-Sept iri ise na asaa
58 Cinquante Huit iri ise na asatọ
59 neuf iri ise iri ise na itoolu
60 dị ụtọ iri isii
61 soixante et a iri isii na otu
62 soixant-deux Iri isii na abụọ
63 soixant-trois Iri isii na atọ
64 soixant-quatre iri isii na anọ
65 soixant-cinq Iri isii na ise
66 iri isii na isii Iri isii na isii
67 soixant-Sept iri isii na asaa
68 soixant-huit Iri isii na asatọ
69 soixant-neuf iri isii na itoolu
70 soixant-dix iri asaa
71 soixant et ozo iri asaa na otu
72 soixant-douze Iri asaa na abụọ
73 soixant-treize Iri asaa na atọ
74 soixante-kwatorze iri asaa na anọ
75 soixant-quinze Iri asaa na ise
76 soixante-jide Iri asaa na isii
77 soixant-dix-Sept iri asaa na asaa
78 soixant-dix-huit iri asaa na asatọ
79 soixant-dix-neuf Iri asaa na itoolu
80 qutre-vingts iri asatọ
81 quatre-vingt-un iri asatọ na otu
82 quatre-vingt-deux Iri asatọ na abụọ
83 quatre-vingt-trois Iri asatọ na atọ
84 qutre-vingt-quatre iri asatọ na anọ
85 nri ọhụrụ iri asatọ na ise
86 quatre-vingt-isii iri asatọ na isii
87 quatre-vingt-Sept iri asatọ na asaa
88 quatre-vingt-huit iri asatọ na asatọ
89 quatre-vingt-neuf iri asatọ na itoolu
90 quatre-vingt-dix iri iteghete
91 qutre-vingt-onze Iri itoolu na otu
92 quatre-vingt-douze Iri itoolu na abụọ
93 qutre-vingt-treize iri itoolu na atọ
94 quatre-vingt-quatorze Iri itoolu na anọ
95 qutre-vingt-quinze Iri itoolu na ise
96 quatre-vingt-jide Iri itoolu na isii
97 quatre-vingt-dix-Sept Iri itoolu na asaa
98 qutre-vingt-dix-huit iri itoolu na asatọ
99 quatre-vingt-dix-neuf iri itoolu na itoolu
100 pasent cien
Nọmba French sitere na 1 ruo 100 nwere ụfọdụ nuances nke ekwesịrị icheta. Dị ka anyị nwere ike ịhụ, mgbe ọ kwụsịrị na 1, ama ama na, n'ụzọ dị otu a ka ekwuru 21 oge et a, 61 kwuru soixante et a, wdg. A na -ahazi ọnụọgụ ndị ọzọ n'ụzọ ezi uche, naanị ihe bụ na ị ga -eji hyphen sonyere ha. Yabụ, 68 bụ 60 + 8, ya bụ, soixant-huit. Ihe a niile anyị na -agụta bụ iwu izugbe maka ọnụọgụgụ site na 20 ruo 60. Dịka anyị ga -ahụ na -esote, ọnụọgụ 70, 80 na 90 pụrụ iche.
Enweghị ntụgharị asụsụ ozugbo nke iri asaa n'asụsụ French. Ejiri ya n'ụzọ mgbakọ na mwepụ, ebe ọ bụ na 70 = 60 + 10, mgbe ahụ Ọnụ ọgụgụ iri asaa na French bụ soixante-dix. Nọmba 80 na -agbaso otu usoro mgbakọ na mwepụ ebe 80 = 4 * 20, mgbe ahụ, a na -ekwu iri asatọ afọ anọ. N'ikpeazụ, 90 na-adị ka iri asaa n'ihi na: 90 = 80 + 10. Mgbe ahụ, iri itoolu bụ quatre-vingt-dix. Maka ọnụọgụ dị ka 75 ma ọ bụ 84, a na -agbaso iwu nke edemede na paragraf gara aga. Dịka ọmụmaatụ, iri asaa na ise ga-abụ soixante-iri na ise na iri asatọ na anọ ga-abụ quatre-vingt-quatre.
Site na 1 ruo 1000
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịhụ ọnụọgụ karịrị 100, anyị akwadebela tebụl nwere ọnụọgụ ruru 1000 n'asụsụ French, dịka ọ ga -ewe nnukwu oghere na enyo, anyị akwadebela PDF na tebụl na akụkọ ndị ọzọ ka ebipụta.
na Nọmba ọnụ, dị ka aha ya si eche, gosi usoro. N'okpuru ị nwere ike ịhụ tebụl nke ọnụọgụ nọmba mkpụrụedemede French sitere na 1 ruo 100:
5 nke ise
7 nke asaa
9 nke iteghete
13 iri na atọ
14 nke iri na anọ
15 iri na ise
21 vingt et unieme
31 trente et unieme
37 iri atọ na asaa
41 kwarantat et unieme
50 iri ise
51 cinquante et unieme
52 iri ise-deuxième
55 iri ise-cinquieme
57 iri ise-septieme
59 iri ise-neuvième
60 nke ọma
61 soixant et unième
71 soixant et onzième
N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara Nọmba kadinal, nke na -egosi kadinality. Nke ahụ bụ, ọnụọgụ nke ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịsị na ị nwere dos pensụl, ị na -eji nọmba kadinal, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịsị na ị bi na ụlọ nke abụọ, ị na -eji usoro iwu. Nọmba kadinal bụ nọmba anyị ji na-emekarị. Na agbanyeghị, nke a bụ nọmba kadinal na French site na 1 ruo 100:
11 iri na otu
12 iri na abụọ
14 iri na anọ
16 iri na isi
18 iri na asatọ
19 dik neuf
20 iri abụọ
21 oge et a
25 iri abụọ na ise
30 iri ato
33 iri atọ na atọ
34 iri atọ na anọ
35 iri atọ na ise
36 iri atọ na isii
39 trente neuf
41 kwarantaini na un
51 iri ise et un
52 iri ise-deux
53 iri ise trois
54 iri ise na anọ
55 iri ise na ise
56 iri ise na isii
58 Cinquante Huit
59 neuf iri ise
60 dị ụtọ
61 soixante et a
66 iri isii na isii
71 soixant et ozo
85 nri ọhụrụ
Si akpọ nọmba na French
Ịmata ka esi akpọpụta nọmba nke ọma dịkwa mkpa ịmara ihe ha bụ. N'ụzọ dị otu a, anyị akwadobela tebụl ebe ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ ahụ n'onwe ya, site na 1 ruo 20 Kedu otu ị ga -esi kwuo ha n'asụsụ Spanish ka ha wee jiri ụda olu French na -ada ụda, a ghọtara nke a? Nke ahụ bụ, na tebụl na -esonụ, dị ka a ga -asị na ị ga -agụ na spanish, ị na -ekwu ya ka ọ dị ma ị ga -ahụ na ọ na -ada ụda nke ukwuu Asụsụ French ???
Anyị na -atụ anya na akụrụngwa a bara ezigbo uru. Ka o sina dị, ebe ọ bụ na a na -ahụ naanị ọnụọgụ iri abụọ, anyị nwekwara vidiyo nke onye ala French ga -eji kwupụta ọnụọgụ ndị ahụ n'olu dara ụda. Dịka ị ga -ahụ na ntụnyere, ọ yitụrụ ma ọ bụ karịa, n'ikpeazụ ọ bụ maka ntachi obi na ime ihe na izu oke. Vidiyo dị n'ime:
Oge njedebe: 0
Nchịkọta nke ajụjụ a
0 nke ajụjụ 10 dechara
Na -esote, anyị akwadebela gị mmega ahụ ole na ole ka ị nwee ike nwalee ihe ọmụma gị gbasara ọnụọgụgụ na French. Ị nwere ike ịtụle ihe anyị na -amụta n'ime akụkọ a na -enweghị nsogbu, ihe dị mkpa bụ ka ị debe ihe ndị bụ isi na isi ihe 🙂 jisie ike!
I meela ajụjụ a. Yabụ, ịnweghị ike ịmalite ya ọzọ.
Na -adọnye ajụjụ a ...
Ị ga -abụrịrị onye ọrụ edebanyere aha ka ị were ajụjụ a.
Ị ga -emerịrị ajụjụ a na -esote tupu, ịmalite ajụjụ a:
Ị nwetara 0 de 0 enwere ike (0)
Ekenyeghị ya ụdị ọ bụla 0%
Ajụjụ 1 de 10
Kedu ka ị si asụ nọmba 5 na French?
Ajụjụ 2 de 10
Kedu ka ị si asụpe 142?
Ajụjụ 3 de 10
Atọ soixante atọ ọzọ ...
Ajụjụ 4 de 10
Kedu ka m si mara sụgharịa na french ahịrịokwu na -esonụ: «Nna m Vicente dị afọ 48»
Achọpụtara m Vicente iche iche
Anyị hụrụ Vicente n'anya nke ukwuu
Ma mere Vicenta a cinquante-huit ans
Ajụjụ 5 de 10
3 + 8 ...
iri na otu
Ajụjụ 6 de 10
Soixante-six gbakwunyere vingt ...
Ajụjụ 7 de 10
Kedu ka edere ya Iri na asaa na French?
Ajụjụ 8 de 10
Ị masịrị ibe a?
Ajụjụ 9 de 10
Kedu nọmba soixant-Sept?
Ajụjụ 10 de 10
Deux gbakwunyere font trois ...
Categories Frances, Asụsụ Igodo bọtịnụ
Ngwaa French: ndepụta, mmega ahụ na njikọta
Oge awa na French: kedu ka esi ekwu ha?
Inicio » Asụsụ » Frances » Nọmba French sitere na 1 ruo 1000
Ọnụọgụgụ ndị Rom sitere na 1 ruo 1000
Nọmba Bekee sitere na 1 ruo 1000
8 kwuru na "nọmba French sitere na 1 ruo 1000"
Eprel 25, 2019 na 3:17 am
Merci ị nyere m aka maka ụlọ akwụkwọ
Mee 29, 2019 na 5:44 am
Daalụ maka ibe a enwetara m 9 na ule m
June 18, 2019 na 11:06 pm
Atụrụ m anya na echi ga -aka nke ọma karịa ule gara aga na dịka ọ bụ ọnụ. Ọ ga -esi ike
June 13, 2019 na 7:17 pm
Daalụ maka mmemme ndị a, ọ dị ezigbo mkpa ịmụ asụsụ French.
Teresa Romero Lopez
June 17, 2019 na 8:11 pm
Merci, ahụrụ m ụfọdụ mmejọ m nwere
July 14, 2019 na 9:45 pm
Na -akpali mmasị nke ukwuu.
August 27, 2019 na 12:00 am
DARIO HERRERA VALENCIA
Septemba 2, 2019 na 2:23 pm
Daalụ maka ụzọ dị mfe ma dị ụtọ iji kọwaa ihe niile n'ụzọ zuru oke na ekele maka mmasị ị nwere ime ka asụsụ a mara.
P 2022 UniProyecta